SPC Smartee Boost, famantaranandro amin'ny vidiny mirary tokoa | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 09/08/2021 10:00 | General, hevitra
Ny famantaranandro marani-tsaina dia efa nalamina tamin'ny fomba demokratika, ankoatry ny hafa, amin'ireo marika toa ny SPC izay manolotra vokatra misy elanelana fidirana ho an'ny mpihaino rehetra. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny famantaranandro marani-tsaina isika, izay tsy maintsy dinihintsika, ary indrindra momba ny safidy mahomby indrindra raha miresaka momba ny vidiny sy ny fampiasa izy.
Miresaka momba ny SmartC Boost an'ny SPC izahay, ny finday avo lenta farany misy GPS miampy sy fahaleovan-tena lehibe atolotra amin'ny vidiny ara-toekarena. Jereo miaraka aminay ity fitaovana vaovao ity ary raha tena mendrika izany na eo aza ny vidiny mirary dia aza hadino ity famakafakana lalina ity.
Toy ny mitranga amin'ny fotoana maro, nanapa-kevitra izahay fa hiaraka amin'ity fanadihadiana ity amin'ny alàlan'ny horonantsary fantsona YouTube anay, Amin'izany no hahafahanao mandinika tsy ny famoahana boaty ihany fa koa ny fomba fanamboarana manontolo, koa manasa anao izahay hameno ity famakafakana ity dia afaka mijery sy manampy anay hitombo.
3 Sarimihetsika sy fampiharana
4 Fiofanana sy fizakan-tena
5 Fandraisana sy traikefa an'ny mpampiasa
Araka ny antenaina amin'ny famataran'ity fihenam-bidy ity dia mahita fitaovana iray vita amin'ny plastika isika. Na ny boaty na ny ambany dia mitambatra karazana plastika mainty matte, na dia afaka mividy kinova mavokely aza isika.
Milanja: 35 grama
Refy: 250 x 37 x 12 mm
Ny fehin-kibo tafiditra dia manerana izao rehetra izao, noho izany dia afaka manolo azy mora foana isika, izay tombony mahaliana. Izy io dia manana refy ankapobeny 250 x 37 x 12 mm ka tsy dia lehibe loatra, ary 35 grama fotsiny no lanjany. Izy io dia famantaranandro somary voafintina, na dia tsy mibahana ny tampony manontolo aza ny efijery.
Manana bokotra tokana izahay izay manahaka ny satro-boninahitra amin'ny ilany ankavanana sy any aoriana, ho fanampin'ny sensor, manana ny faritry ny tsimatra magnetized ho an'ny famandrihana. Amin'io lafiny io, ny famantaranandro dia milamina sy mora ampiasaina.
Mifantoka amin'ny fifandraisana izahay ary io dia manodidina ny teboka roa lehibe. Ny voalohany dia ananantsika Bluetooth 5.0 LE, Noho izany, ny haavon'ny fampiasana ny rafitra dia tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny baterin'ny fitaovana na ny smartphone ampiasaintsika. Ho fanampin'izay, manana isika GPS, Noho izany dia ho vitantsika ny mitantana tsara ny fihetsiketsika rehefa mitantana fotoam-pampiofanana, amin'ny valin-kafitsika dia nitondra vokatra tsara. Toy izany koa GPS ihany koa dia mahita antsika handray amina sombin-javatra sasany amin'ny fampiharana Weather tafiditra ao.
Tsy tantera-drano hatramin'ny 50 metatra ny famataranandro, raha ny tokony ho izy dia tsy tokony hiteraka olana izany rehefa milomano miaraka aminy, izany dia mety noho ny tsy fisian'ny mikrô sy ny mikrôfera, na izany aza. mihozongozona izy ary mandeha tsara. Mazava ho azy fa manana refin'ny tahan'ny fo isika, fa tsy amin'ny fandrefesana oksizenina amin'ny rà, endrika iray mahazatra hatrany.
Tsy manadino asa hafa aho raha toa ka mihevitra ny vidiny ambany amin'ity vokatra ity izahay, izay natao ho an'ny elanelana fidirana.
Sarimihetsika sy fampiharana
Manana a tontonana kely IPS LCD kely, indrindra indrindra 1,3 santimetatra ny totaliny izay mamela fefy ambany somary voatonona. Na eo aza izany dia mampiseho mihoatra noho ny ampy amin'ny fampisehoana isan'andro izy io. Noho ny fandinihana azy tamin'ny fitsapana nataonay dia afaka namaky mora foana ireo fampandrenesana izahay ary manana tombony sasany manamarika izany.
Ny voalohany dia takelaka misy laminated izay misy fonosana fanoherana ny taratra ampiasaina mora amin'ny tara-masoandro. Raha ampiarahintsika amin'ny famirapiratana faran'izay kely sy kely indrindra atolotray azy io, ny zava-misy dia mahazo aina ny fampiasana azy eny ivelany, manana zoro tsara izy ary tsy very vaovao.
Misy ny fampiharana Smartee iOS and for Android Mazava izany, raha ny amin'ny fampifanarahana azy dia ny manaraka fotsiny no ataontsika:
Ampianaro ny fitaovana hampiala azy
Ampidininay ny rindranasa
Miditra izahay ary mameno ny fangatahana
Izahay dia mizaha ny kaody bara miaraka amin'ny laharana serial an'ny boaty
Hiseho ny boaty SPC Smartee Box ary tsindrio ny hifandray
Hifanaraka tanteraka izany
Ao amin'ny fampiharana Azontsika atao ny manadihady fampahalalana marobe mifandraika amin'ny fampisehoana ara-batana antsika toy ny:
Na eo aza ny zava-drehetra, dia tsotra loatra angamba ilay fampiharana. Manome fampahalalana kely ho antsika izy io, na dia ampy tsara amin'izay lazain'ny fitaovana atolotra azy aza.
Fiofanana sy fizakan-tena
Ny fitaovana dia misy maromaro presets fanofanana, izay manaraka manokana ireto:
Mihazakazaka amin'ny treadmill
Bisikileta anaty trano
Milomano rano misokatra
Halefa ho azy ny GPS amin'ny hetsika "ivelan'ny trano". Azontsika atao ny manova ny hitsin-dàlan'ny fiofanana ao amin'ilay atin'ny mpampiasa an'ilay famantaranandro.
Mikasika ny bateria dia manana 210 mAh isika izay manolotra farafahakeliny 12 andro mitohy, Saingy miaraka amina fotoam-pahavitrihana mavitrika ary navitrika ny GPS, dia naheninay ho 10 andro, izay tsy ratsy koa.
Fandraisana sy traikefa an'ny mpampiasa
Ny interface user dia intuitive, eny, 4 spheres fotsiny no azontsika ahodina amin'ny alàlan'ny fanaovana gazety lava amin'ny «start». Toy izany koa, amin'ny hetsika miankavia dia manana fidirana mivantana amin'ny GPS sy ny asan'ny fitadiavana telefaona isika, izay hamoaka feo.
Navoaka tamin'ny: 9 Aogositra 2021
Fanovana farany: 3 Aogositra 2021
Amin'ny ankavanana dia manana angon-drakitra momba ny fahasalamana sy ny fanofanana izahay, ary koa amin'ny vatasarihana fampiharana dia hahafahantsika miditra amin'ny fanairana, ny fampiharana Weather ary ny sasany hafa izay hanampy antsika amin'ny fampisehoana isan'andro. Raha ny marina dia manome fampiasa vitsivitsy ankoatra izay hatolotry ny fehin-tanana fanarahana fanatanjahan-tena, fa ny haben'ny efijery sy ny fifandraisan'ny mpampiasa dia manamora ny fampiasana azy isan'andro.
Raha fintinina, manana vokatra izay mitovy amin'ny bracelet ianao, saingy manolotra efijery misy famirapiratana tsara sy habe ampy. hanamorana ny fampiasana azy amin'ny vidiny ambanin'ny 60 euro amin'ny isa amidy mahazatra. Alternative tena mahaliana sy vidiny mirary tokoa rehefa miresaka smartwatch isika.
Fampisehoana azo ampiasaina sy mamiratra
Manana GPS sy fampihetseham-batana betsaka izy io
Afaka milomano miaraka aminy ianao
Milatsaka ny fizakan-tena amin'ny alàlan'ny GPS
Tsy hita ny metatra oksizenina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » SPC Smartee Boost, famantaranandro amin'ny vidiny mirary
Tetikasa mpandahateny IKEA SYMFONISK, feo tsara kokoa ary famolavolana bebe kokoa [Famerenana]